साताको पहिलो दिन घट्यो नेप्से, ३१ करोडको मात्रै कारोबार – BikashNews
साताको पहिलो दिन घट्यो नेप्से, ३१ करोडको मात्रै कारोबार
२०७६ साउन २६ गते १८:०९ विकासन्युज
काठमाडौँ । धितोपत्र बजारमा सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आजपनि ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक ४.८४ बिन्दुले घटेर एक हजार २३३.७१ बिन्दुमा पुगेको छ । यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक ०.४० बिन्दुले घटेर २६७.६० बिन्दुमा पुगेको छ ।
नेप्से ओरालो लागेसँगै कारोवार रकमसमेत सस्तैमा समेटिएको छ । कूल १६६ कम्पनीको ११ लाख ४५ हजार ५०७ कित्ता शेयर रु ३१ करोड १७ लाख ५६ हजार ८५६ मूल्यमा खरीद बिक्री भए । स्टकका अनुसार कारोवार भएका कूल १२ उपसमूहमध्ये आज पाँच उपसमूहको सेयर बढेको छ भने सात उपसमूहको शेयर ओरालो लागेको छ । व्यापार १३.७७, होटल १६.४६, वित्त १.२५, अन्य १.८८ र सामूहिक लगानी कोष ०.०२ बिन्दुले बढेको छ ।
खुल्ने भयाे ग्लोबल आईएमई बैंकको सेयर कारोबार, मूल्य कति ?
विन्ध्यावासिनी हाइड्रोपावरले २५ करोडको आईपीओ जारी गर्ने
माउभन्दा सहायक कम्पनी बोटलर्स नेपाल (तराई) को सेयर किन महंगो ? (समग्र विश्लेषण)